Madaxweyne Gaas oo Shacabka Ugu Hambalyeeyey Maalmaha Xoriyadda Soomaaliya[Dhageyso] | SAHAN ONLINE
Madaxweyne Gaas oo Shacabka Ugu Hambalyeeyey Maalmaha Xoriyadda Soomaaliya[Dhageyso]
Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa umadda Soomaaliyeed meelkasta oo ay joogaan ugu hambalyeeyey maalmaha xoriyadda Soomaaliya oo inagu soo aadan , islamar ahaantaana ah maalmo taariikhi ah.
‘’ Waxaan ugu horeyn hambalyeeyn maalinta 26-juun oo ah maalintii ugu horaysay ee dalka laga taagay calan Soomaaliyeed iyo maalinta xigta oo 27-juun ah oo ah maalintii xoriyadda walaalaheena Jabuuti iyo sidookale maalinta 1-da luulyo oo iyana nagu soo aadan ‘’ Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
Madaxweynaha ayaa guud ahaan umadda Soomaaliyeed gaar ahaan umadda reer Puntland u rajeeyey in sanadkaan sanadkiisa kale ay ku gaaraan Nabad iyo Barwaaqo , rabina uu ka saaro dhibaatooyinka dalka kajira .
‘’ Waxaan rajeynaynaa inagoo mid ah Soomaali ah meelna uwada socda in aynu hanano dawladnimadeeni iyo qaranimadeeni si buuxda oo wanaagsan , dawladnimo Soomaaliyeed ayaa dhammaanteen ina deeqda ‘’ Ayuu hadalkiisa raaciyey Madaxweynuhu.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Gaas ayaa sidookale si gaar ah ugu hambalyeeyey shacabka iyo dawladda Jabuuti sanadguuradooda 38-aad ee ka soo wareegatay xornimadoodi.